TSY MAHAZAKA FITONDRANA NY MPANONGAM-PANJAKANA – MyDago.com aime Madagascar
TSY MAHAZAKA FITONDRANA NY MPANONGAM-PANJAKANA
Mitohy hatrany eny amin’ny kianjan’ny finoana Magro Behoririka ny hetsiky ny vahoaka mpomba ny movansy Ravalomanana. Nisy hatrany ny lahateny nifandimbiasana teny an-toerana ka anisan’ny nandray anjara fitenenana tamin’izany ny Ct Horace. Nambarany fa isika rehetra ireto dia ilaina daholo amin’ny fihodinana faharoa ka noho izany dia ny fandehananao miresaka amin’ny namanao dia efa andraikitra lehibe . Isika hoy izy tsy matimatin’ny hoe tsy nahazo tee-shirt, kasikety fa izay fitiavana izay no niaretantsika teto nandritra ny dimy taona. Mazava ny antsika hoy izy fa tolona dia tsy vita raha tsy tonga i Dada ary hanambatra ny hery isika mba tsy hisy hamotika. Horaisintsika avokoa izay rehetra mahatsapa fa ilaina ny mivoaka amin’ny krizy. Na iza na iza hoy izy manakivy dia tsotra ihany ny antsika ny fifidianana tsy maintsy mandeha ary tsy maintsy mandresy isika. Ramatoa Perle Razafy izay mpiasan’ny Rnm efa nisotro ronono kosa dia nanentana ny olona ho tonga maro hameno ny kianja, manana anjara lehibe isika hoy izy amin’izany. Ny Ct Manoela dia niantso an’Antananarivo izay voa mafy tamin’ny voka-pifidianana , alaivo ny kara-pifidianana hoy izy fa aza avela any. Amboary ny lisitra fa misy tsy mety ao. Manomboka eto dia esory ny fanilikilihana fa tsy mety fa rehefa fantatrareo fa ilaina ny olona amin’ny propagandy dia eto fa isika tsy mitady toerana fa ny Filoha Ravalomanana no nitolomana teto hatramin’izay. Mahakasika ny voka-pifidianana tany Toliary ka nandresin’I Camille Vital dia nambaran’ity olomboantendry avy any ity fa efa niteny tamin’ny mpitarika ny tenako hoy izy fa aza asiana coach politika fa coach toekarena atao, ary rehefa mitondra olona any amin’ny faritra dia aoka ny olona tsy tian’ny vahoaka tsy ho entina hanaraka any fa manimba vato. Ny Ct Raveloson Constant dia nanambara fa tsy maintsy ailika ny mpanongam-panjakana any amin’ny andrim-panjakana rehetra any. Na misy na tsy misy hoy izy ny fihodinana faharoa dia tsy maintsy azontsika ny parlemantera. Raha ny tatitra azoko hoy izy dia kivikivy ilay zandrikely satria nifamosavy ireto namana, nifampisaboty tamin’ny angindimby, kivy izy fa raha ilay nitsambikimbikina iny no 2eme tour dia tsy hanohana ny sasany. Nisy hoy ity mpanao politika ity omaly tao Akorondrano tao fivoriana nataon’izy ireo ka nilazan’I zandrikely hoe izay fitaovana ilainareo dia omeko fa tohano Hery. Nifampihatsaravelantsihy tao izy ireo ka nanaiky. Efa tsy voabaikointsony ilay namana tamin’ny 2009. Maodely ratsy ho an’I Madagasikara hoy izy no nasehony ary mbola hotohizany. Hisy hilaza hoy Constant hoe noho ny tanindrazana dia tsy misakana ny mpifidy hifidy izahay, misy amin’ireo indray ny ho Hendry be, ary ao ny hilaza fa hanohana an’I Robinson fa efa nisy fepetra niarahana. Tsy mahazaka fitondrana ny mpanongam-panjakana hoy ity olomboantendry ity na ny meeting nataony aza dia nanamarika izany. Noho izany hoy izy dia ampio tosika, omeo hery ny namana amin’ny fomba izay hitenenanareo azy. Ny zavadehibe amin’izany dia isika tsy mahay miady fa rehefa amin’izao dingana izao dia milaza hoe mifandray aloha ary rehefa avy eo misy tafiondrivotra, ka rehefa avy mifandamina amin’ny feeptra mazava. Ny tsikaritro hoy izydia rehefa vita ny fihodinana voalohany dia teo no niseho ny tafiondrivotra, ohatra niseho ny hoe ianareo mpanohana fotsiny fa anay ny soavaly. Tonga izao ny fotoana hoy izy handravonana izany. Ny tenako dia manasa ny Avana ho tonga eto ankianja fa fombanjavatra izany. Nanao antso ho an’ny rehetra ihany koa ny tenany hoe eto ny hetsika fa tsy tanisaina fotisny, any amin’ny fokontanintsika ny vbaolina, rehefa lisitra no resahina ary any ihany koa no resahina rehefa misy olona tsy ao anaty adiresinao. Noho izany izay mazoto hoy izy hifampila hevitra, hoe inona ny hetsika ataontsika hampizotra ny fifidianana amin’ny fahamarinana ka ireny no aravontsika. Misy hetsika tokony atao fa tsy eto fotsiny no hitaraindraina. Rahampitso amin’ny 1ora moa no fotoana nomeny ny oona ho amin’izany.
RAVELOSON CONSTANT : EFA BIBY IO FITONDRANA MPANONGAM-PANJAKANA IO
TSY MAINTSY AVERINA NY SAFIDIN’NY VAHOAKA NANGALARIN’NY MPANONGAM-PANJAKANA
MATAHOTRA NY ANARANA RAVALOMANANA NY FRANTSAY SY NY MPANONGAM-PANJAKANA
Auteur Solo Razafy*Publié le 30 octobre 2013 30 octobre 2013 Catégories Politique
10 pensées sur “TSY MAHAZAKA FITONDRANA NY MPANONGAM-PANJAKANA”
velirano dit :
Raha jerena ny vokapifidianana, de normal raha mahazo 27% Ravalomanana, fa tsy Robinson. Ireo zany sisa no vahoaka malagasy mbola nalahelo ny dadanareo. Raha atambatra kosa ny vaton’ny Hajo, Rolland Ratsiraka, Camille Vital, Edgar ary HERY, de mazava be fefa navalon’ny tantara Ravalo, tsy araka ny nantenaina woe, fiodinana voalohany de vita, zany woe,rha nanolotra olon-tokana ny mpomba an-dRajoelina, de vita matavy Ravalomanana fa tsy Robinson. De hiraraka zany ry Hajo ny vola @ fiodinana faha 2 avy any @n-dRainivoanjo. Raiso fa adala tompo, fa tandremo fa ny olona niaraka ihany no afaka tsy hivadi-belirano, fa hainareo ihany fa tsy mena-mivadika Rainivoanjo, ka tambazany seza eo, lany eo izy tonga de tsy mahita mangirana ny seza nampanantenaina, ary mbola loza ny hanjo anareo tsy mahaleo ny mena miraviravy eo, fa mbola tsy maty voalavo an-kibo io rangahy io, fa ny hamotika anareo no tetehany.
Robinson koa ane tsy hanaiky gisitra, fa fantany raha lany eo izy de ny sezany no tetehan’ilay voay be, ka misy dikany le woe, afaka mody Ravalomanana, fa tsy hidirako ny aferany @ justice. De hahita tsara ianareo, fa hisy hanenina tongotra aman-tanana, ny volabe lany nanohanana olona, ny tena tsy afaka mody na higadra, ny tratra mangana. De efa nandroso moa iny ka maty renibe. Aza mba vena ihany woa. Atambaro ny Hery ry zalahy, sao hanenina ianareo raha mbola hisaratsaraka tahaka an’iny voalohany iny. Masina ny tanindrazana!
30 octobre 2013 à 18 h 16 min
Ho tapaka lalandà ity velirano ity wa! Vely daba ny hafaranareo mpanongampanjakana tsy ho ela ary mba hafodio io vava feno tay io
Andraso tsara ny vote » sanction » ry andevon’ni FERY BOANTAY!!!! Veleso ny tavo rehefa resy !
Tsy adala ny vahoaka ka mbola hifidy fitondrana « Fozaorana 2 » indray , ny nataon’ny fitondrana « Fozaorana 1 » aza efa tay no nohanin’ny vahoaka , matoa hatahoran’ny CI , Frantay , OIF sy ny alika manaraka rehetra i DADA dia « Favori » izy zay ! BASTA
30 octobre 2013 à 18 h 41 min
Aoka isika malagasy tsy hiady. Ny hevitra no miady fa tsy ny olona. Ny saina ampiasaina fa tsy ny fo. Ny fo rano mafana. Aoka samy hitondra am-bavaka ity firenentsika ity. Averiko ihany fa izay tendrin’Andriamanitra no tsy maintsy lany eo. Afaka mampiasa sy mandany ny volany rehetra fa rehefa tsy sitrak’Andriamanitra dia tsy lany. Mivavaha mafy ho an’ny firenena ka na inona na inona asan’ny devoly mampiady an-trano dia ravana sy potehina in the mighty name of Jesus. I proclaim the Lordship of Jesus Christ in this country MADAGASACAR.Jesus is Lord of MADAGASCAR.
30 octobre 2013 à 19 h 00 min
Mba vakio itony ry foza â !
Itony koa ! Ny soa atao hilevenam-bola ! mamim-bahoaka foana !
Nitsaoka daholo ny foza, ary ny sasany efa mieritreritra ny hanantona an’ilay mandina any zenevy !
31 octobre 2013 à 3 h 45 min
Malalaka tsara ny lalana ahazoana ny fandresena, fa mila mihetsika mafy amin’ny firesahana amin’ny manodidina any @ fokontany ny mpitolona rehetra.
Izao valim-pifidianana izao dia maneho fa maro an’isa ny vahoaka manohana ny Ankolafy Ravalomanana, ary naloan’ny vahoaka Malagasy ireto mpanongampanjakana ireto.
Miakatra ndray ny tosidrà ny zana-dRainivoanjo rehefa tairina kely. Midera ny fanehoan-kevitrareo ry Hars a! zay ane no mahavoan’ireto zanak’i dada ireto, tena tsy mazaka demokrasia. Na inona na inona ry KM lazain’ny la gazette de andron’ny fifidianana izao a! Mazava be io article io e! tsotra fotsiny, rangitina zay niaraka fahiny mba hisaratsaraka, de lazaina fa ranona manao tsinontsinona na manambany an-dranona. Tany aloha ane mpomba an-dRajoelina io gazety io e! rehefa mamafy volabe Raosy de saika lasany avokoa ny gazety mpiseho isan’andro. Mazava be io analyse nay io, 27% sisa ny vahoaka malagasy mahatoky an-dRainovoanjo. De ty ndray ny sopapa omeko, ho entin’ny Zandry miady @ adve @ 2ème tour: Tena niseho masoandro nanohana be ary saiky tsy tazana intsony Rajean Louis, fa de an-dRaosy mivady ny fifidianana. De jereo @izay fa hseho @izay Zandrikely fefa iray sisa ny candidat eo. hitokana zava-bita miaraka @ HERY izy, handeha hampandany azy. Hivoaka eo @zay ny affiche faran’izay zokiny. Ekena fa mety tsy handany azy ny fartanin’Antananarivo, fa mbola misy provinces 5 Madagasikara, de ho hita eo ny tohin’ny tantara ary mbola ho voaporofo @ 2ème tour io, fa tsy araka lay tabataba teny @ Coliseum namboarin-dRajoelina, zay nampizesta ny tsy manankambo woe, 1 tour de vita. De ny tena no menatra raha zay nanenjehana an’i Zandrikely zay nanamboatra io kianja be io. Raha za nareo misitrika, marina e! Ary aza mora tonga fofona sy mora miakatra toso-drà moa fa ny hevitra no miady, sa ahoana Hars?
didakely dit :
1 novembre 2013 à 9 h 20 min
Velirano an! sao dia ianareo no tsy mahazaka eeeeee!, ianao milaza hoe tokony h menatra satria mampiasa ny coloseum namboarin’i zandry kelyf ianareo iany dia mitamikenatra mampiasa ny Salle de conférence eny Ivato izaynamboarin’i Dada ary n Lalaa izay namboarin’i Dada dahol ani io hireharehanaeo io eee!, ireo aloha ny malagasy navela hifidy, dia izay fa tsy hoe ireo ihany ny Malagasy tia an’i Dada
Précédent Article précédent : Nihaona mangina Attalah Beatrice sy Hery Rajaonarimampianina
Suivant Article suivant : ANKAZOBE VS AMBOVOMBE